Soomaalidu waa ey ka siman yihiin magac xumida laga qabo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Saciir Shiikh Cabdi. Sawirle: Kenadid Maxamed
Soomaalidu waa ey ka siman yihiin magac xumida laga qabo
Inta Soomaaliya dhibtu ka jirto waxaan mataleynaa halkaa
La daabacay fredag 15 mars 2013 kl 13.30
Sannadahii ugu dambeeyey ayuu ka dhexeeyey xiriir aad mooddo inuu ka sii qoto dheeraanayo soomaalida ku dhaqan dalkan Iswiidhen iyo dhiggooda ee dalka Mareeykanka qaasatan magaalada Minneapolis. Idaacadda Caalamiga ee raadiyaha Iswiidhen laanteeda Soomaaliga ayey dhageeysteyaasha ku xirani marar dhowr ah ka dhageeysteen barnaamijyo amuurtaa la xiriira uuna ugu dambeeyey is-barbar-dhigga habka is-dhex-galka soomaalida ee dalkan Iswiidhen iyo soomaalida mareeykanka sida ey dalkaasi ula qabsadeen. Midkaasina oo laga muujiyey fikirro kala duwan. Balse barnaamijka maanta qeybtiisan waxaannu tooshka ku saari doonnaa dhibaatooyinka ey soomaalida qorba-joogta ahi wadaagaan:
Soomaalida qurba-joogta ah ayey la soo gudboonaadaan iyada oo aan loo kala aaba-yeelin hab-dhaqan qalafsan iyo sawirrada liita oo ka soo wajaha bulshooyinka ey u soo baqooleen ama ey ku dhex nool yihiin, sida uu noo sheegay Siciid Shiikh Cabdi, kana mid ahaa wafdi ka soo baqoolay carriga Minneapolis ee dalka Mareeykanka si ey fikirro iyo waayo-arag-nimo isu dhaafsadaan soomaalida ku dhaqan goobo ey ka mid yihiin magaalooyinka Istockholm, Västerås iyo Växsjö, sida uu noo sheegay.
Cabdiqani Maxamed oo ka mid ah bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkan Iswiidhen ayaa sheegey in soomaalida dalkan ku dhaqan ey la qabaan caqabaddaa reer Minneapolis. Kuna tilmaamay in ey sawirro noo noqdeen intii xumeeyd:
Haddaba iyada oo ey sawir isku mid ah ka bixiyeen Siciid Shiikh Cabdi iyo Cabdiqani Maxamed caqabadaha la soo gudboonaada soomaalida ku dhaqan Mareeykanka iyo Iswiidhen iyo soomaalida gebi ahaanba meel kastoo ey ku sugan yihiin ayey haddana siyaabo kala duwan u arkaan ama xalka iyo sidii is bedel loogu sameeyhn lahaa middaa.
Siciid Shiikh Cabdi ayaa fikirkiisu ku wajahan yahay in soomaalida qur-bajoogtu ey meel walba ey joogaan u istaagaan sidii ey magacaa wax uga qaban lahaayeen iyaga oo adeegsanaya mashruucyada noocan oo kale ah, iyada oo weliba lala kaashaneyo cid walba ee gacan ka geeysan karta. Haddey noqon laheyd bulshada loo yimid iyo sidoo kale qoowmiyadaha kale ee dalka kula dhaqan. Halka uu Cabdiqani Maxamed qabo in middaasi ku xiran tahay hadba xaaladda uu dalka Soomaaliya ku sugan yahay oo haddii uu ifafaale yeesho hor-seedi karo ifafaalo saameeyn ku yeesha qurba-joogta. Inkasta oo qurba-joogta laftooda dadaal looga fadhiyo.
Soomaalida qurba-joogta wax ma ka bedeli karaan sumcaddooda waddammada ey ku sugan yihiin, mise waxey ku xiran yihiin xaaladda Soomaaliya?